ထူးဆနျးထှလော Archives - ShwengweGames
ဒီဗီဒီယိုတဈခုဟာ YouTube မှာအကွိမျရသေနျး50နီးပါးကွညျ့ရှုခံခဲ့ရပါတယျ။ပွငျသဈနိုငျငံပါရီမွို့မှ Sonia Rochel အမညျရှိသားဖှားသူနာပွုတဈဦးကထိုအမွှာယောကျြားလေးနှဈဦးကိုမှေးဖှါးပေးခဲ့ပွီး
ထိုအမွှာလေးမြားကိုအထူးရခြေိုးနညျးဖွငျ့ရခြေိုးပေးနခေဲ့တာဘဲဖွဈပါတယျ။အဆိုပါနညျးပညာကသားအိမျတှငျးရှိ ခံစားခကျြကိုထပျတူထပျမြှဖွဈစပွေီးအသကျနှဈလအောကျကလေးငယျမြားအတှကျ ဒီဇိုငျးထုတျထားတာဘဲဖွဈပါတယျ။
Credit (Mckzone daily)
မကြာသေးမီက လူ့လောကထဲသို့ရောက်ရှိလာတဲ့ မွေးကင်းစအမြွှာယောက်ျားလေးနှစ်ဦးဟာမိခင်ရဲ့သားအိမ်ထဲမှာနေခဲ့ရသလို အချင်းချင်းပွေ့ဖက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
အဆိုပါအသက် နှစ်လအောက်အမြွှာယောက်ျားလေးနှစ်ဦးအား သားဖွားသူနာပြုများက ရေချိုးပေးနေစဉ်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဆုပ်ကိုင်ထားခဲ့ကြပြီး
၎င်းလက်နှစ်ဖက်နှင့် ခြေထောက်များဖြင့်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဖက်သွယ်ထားကြတာကိုဗီဒီယိုထဲမှာ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီမယုံနိုင်လောက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာ မွေးကင်းစကတည်းကပင် ထိုနှောင်ကြိုးက မည်မျှနက်ရှိုင်းတာကို ပြသနေပါတယ်။
ဒီဗီဒီယိုတစ်ခု ဟာ YouTube မှာအကြိမ်ရေသန်း50နီးပါးကြည့်ရှုခံခဲ့ရပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရီမြို့မှ Sonia Rochel အမည်ရှိ သားဖွားသူနာပြုတစ်ဦးကထိုအမြွှာယောက်ျားလေးနှစ်ဦးကို မွေးဖွါးပေးခဲ့ပြီး
ထိုအမြွှာလေးများကိုအထူးရေချိုးနည်းဖြင့်ရေချိုးပေးနေခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနည်းပညာကသားအိမ်တွင်းရှိ ခံစားချက်ကိုထပ်တူထပ်မျှဖြစ်စေပြီးအသက်နှစ်လအောက် ကလေးငယ်များအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Categories ထူးဆနျးထှလော Leaveacomment
ကိုယျတိုငျက ဉာဏျရညျမပွညျ့မီသူဖွဈသျောလညျး သားဖွဈသူကို ဆရာဝနျဖွဈအောငျ ပြိုးထောငျပွရငျး အခဈြဟာ အရာအားလုံးကို ဖွဈလာစနေိုငျကွောငျး သကျသပွေနိုငျခဲ့တဲ့ ဖခငျတဈဦး
January 3, 2022 by Shwengwe Games
Down Syndrome နဲ့သူတှဟော ကလေးမယူနိုငျဘူးလို့ လူတှဟောလှဲမှားပွီး ယူဆနကွေပါတယျ။Down ရောဂါနဲ့ အမြိုးသမီးတှဟော ပုံမှနျအတိုငျး ကလေးယူနိုငျကွသလိုတခြိုးရှားပါးတဲ့ဖွဈစဉျတှမှောဆိုဒီရောဂါနဲ့အမြိုးသားတှဟောလညျး ဖခငျဖွဈလာနိုငျပါသေးတယျ။
Jad Issa ဟာ Down Syndrome ရှိသူတဈဦးဖွဈပွီးသူဟာသူ့ဇနီးနဲ့အတူ သားတဈဦးကို မှေးဖှားနိုငျခဲ့တဲ့အပွငျ သူ့သားကို ဆရာဝနျတဈဦးဖွဈအောငျအထိပြိုးထောငျပေးနိုငျခဲ့သူပါ။
ဒီဖွဈရပျကတော့ Syria မှာဖွဈပှားခဲ့တာဖွဈပွီး ကိုယျကြိုးမငဲ့တဲ့အခဈြလောကျဘယျအရာကမှအားမကွီးနိုငျဘူးဆိုတာ ပွသလိုကျတဲ့ဖွဈစဉျတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။
သူ့သားကို သူ့အခဈြတှအေားလုံးနဲ့ ပုံအောပွီးခဈြပါတယျ။
Jad ရဲ့သား Saderမှေးဖှားလာတော့ တခွားကလေးငယျတှလေိုပဲ နှေးနှေးထှေးထှေးနဲ့သူ့မိဘတှကေကွိုဆိုခဲ့ကွပါတယျ။Sader ဟာ သူငယျငယျတုနျးကအခဈြခံရတာတှအေမှတျရကွောငျးနဲ့ သူ့အဖဟော သူနဲ့အတူပှဖေ့ကျနပနျးသတျတာမြိုး၊လကျမခငျြးအလဲထိုးတာမြိုးနဲ့ တခွားကစားနညျးတှလေညျးကစားလရှေိ့ကွောငျး ပွောပွပါတယျ။သူတို့ပတျဝနျးကငျြကလညျး ဒီမိသားစုကို အားပေးထောကျခံမှုတှေ လုပျပေးခဲ့ကွပါတယျ။
Jad က သူ့သားတှအေတှကျ ရညျမှနျးခကျြကွီးကွီးမားမားတှထေားတော့ သူ့သားကျောလိပျတကျနိုငျအောငျပိုကျဆံစုထားရပါတယျ။သူတတျစှမျးနိုငျသမြှသူ့မိသားစုကို ထောကျပံ့ပေးခဲ့တာပါ။ Sader ရဲ့အပွောအရလညျးသူ့အဖရေဲ့ကွိုးစားရုနျးကနျမှုတှဟောသူ့ကိုစာကွိုးစားပွီး ဆရာဝနျဖွဈလာအောငျ လှုံ့ဆျောနိုငျခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
“ဒီလိုထူးခွားတဲ့ဖခငျမြိုး မရှိခဲ့ဘူးဆိုရငျ ဘဝနဲ့ငါ့အလုပျအပျေါမှာ ဒီလိုမြိုး စိတျလှုပျရှားမှု၊ခဈြခငျမှုမြိုး ရှိခဲ့မယျမထငျဘူး။”လို့ သူ့အဖနေဲ့ဓာတျပုံမှာစာရေးထားပါတယျ။
ဖခငျဖွဈသူဟာလညျးသူ့သားဆရာဝနျအတှကျ အရမျးကို ဂုဏျယူနရေသူပါ။
Sader ဟာအခုတော့ သှားဆရာဝနျဖွဈနပေါပွီ။ ဒါဟာ Syria ရဲ့အကောငျးဆုံးနဲ့ဝငျငှအေမြားဆုံးရတဲအလုပျတဈခုဖွဈပါတယျ။Jad ကတော့ အပြျောရှငျရဆုံးသူတဈဦးဖွဈနပွေီး“ငါ့သားက ဆရာဝနျတဈယောကျလေ။”လို့ပွောတိုငျး Jad ရဲ့မကျြလုံးတှဟောအပြျောနဲ့အရောငျတောကျလာစမွဲပါပဲ။
ဒီမိသားစုကတော့ ထငျမွငျခကျြအမှားတှကေို အခုလိုသကျသနေဲ့အတူ အမှနျပွငျပေးရမယျဆိုတဲ့ သာဓကတဈခုပါပဲ။
မိသားစုဆကျဆံရေးအကွောငျးပွောရငျးနဲ့ Sader ပွောပွတာကတော့သူတို့မိဘနှဈဦးရဲ့ ခဈြခွငျးက ဆယျစုနှဈတှအေကွာမှာတောငျမနကေ့မှလကျထပျထားသလိုတညျမွဲနသေေးတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
သူတို့က တဈယောကျရဲ့လိုအပျခကျြကိုတဈယောကျ ကောငျးကောငျးနားလညျကွတယျ။ လမျးအတူလြှောကျရတာမြိုးလညျး သူတို့သဘောကပြွီး တဈခါတဈလဆေို နာရီနဲ့ခြီကွာအောငျ စကားထိုငျပွောနတေတျကွတယျလို့ သူကပွောပါသေးတယျ။
Sader က သူ့အောငျမွငျမှုတှကေို သူ့အဖကွေောငျ့ပါပဲလို့ ပွောကွားခဲ့ပွီး သူ့အဖကေ သူ့အပျေါဂုဏျယူသလောကျသူကလညျးသူ့အဖအေပျေါအရမျးဂုဏျယူရတယျလို့ ဆိုပါသေးတယျ။သူတို့သားအဖဟာဆိုရငျ အားလပျတဲ့အခြိနျတှမှော ဇာတျကားတှလေညျးအတူကွညျ့တတျကွပါတယျ။
ဒီလိုကွညျနူးစရာ ဇာတျလမျးလေးကို ဖတျခငျြကွမယျဆိုတဲ့ သူတှကေို comment မှာ mention လုပျပွီး ကွညျနူးစရာလေးတှေ မြှဝပေေးကွပါဦး။
Down Syndrome နဲ့သူတွေဟာ ကလေးမယူနိုင်ဘူးလို့လူတွေဟာလွဲမှားပြီး ယူဆနေကြပါတယ်။Down ရောဂါနဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ပုံမှန်အတိုင်း ကလေးယူနိုင်ကြသလို တချိုးရှားပါးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာဆို ဒီရောဂါနဲ့အမျိုးသားတွေဟာလည်း ဖခင်ဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်။
Jad Issa ဟာ Down Syndrome ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူဟာသူ့ဇနီးနဲ့အတူသားတစ်ဦးကို မွေးဖွားနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် သူ့သားကိုဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်အောင်အထိ ပျိုးထောင်ပေးနိုင်ခဲ့သူပါ။
ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ Syria မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးမငဲ့တဲ့အချစ်လောက် ဘယ်အရာကမှအားမကြီးနိုင်ဘူးဆိုတာ ပြသလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့သားကို သူ့အချစ်တွေအားလုံးနဲ့ ပုံအောပြီးချစ်ပါတယ်။
Jad ရဲ့သား Sader မွေးဖွားလာတော့ တခြားကလေးငယ်တွေလိုပဲ နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ သူ့မိဘတွေက ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။Sader ဟာ သူငယ်ငယ်တုန်းက အချစ်ခံရတာတွေ အမှတ်ရကြောင်းနဲ့ သူ့အဖေဟာ သူနဲ့အတူ ပွေ့ဖက်နပန်းသတ်တာမျိုး၊ လက်မချင်း အလဲထိုးတာမျိုးနဲ့ တခြားကစားနည်းတွေလည်း ကစားလေ့ရှိကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ဒီမိသားစုကို အားပေးထောက်ခံမှုတွေ လုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
သူ့သားအိမ်မက်တွေ အမှန်ဖြစ်လာအောင် အဖေဖြစ်သူက အလုပ်တွေကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Jad က သူ့သားတွေအတွက် ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးမားမားတွေထားတော့ သူ့သားကော်လိပ်တက်နိုင်အောင် ပိုက်ဆံစုထားရပါတယ်။သူတတ်စွမ်းနိုင်သမျှ သူ့မိသားစုကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာပါ။ Sader ရဲ့အပြောအရလည်း သူ့အဖေရဲ့ကြိုးစားရုန်းကန်မှုတွေဟာသူ့ကိုစာကြိုးစားပြီး ဆရာဝန်ဖြစ်လာအောင် လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
“ဒီလိုထူးခြားတဲ့ဖခင်မျိုး မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် ဘဝနဲ့ငါ့အလုပ်အပေါ်မှာ ဒီလိုမျိုး စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ချစ်ခင်မှုမျိုး ရှိခဲ့မယ်မထင်ဘူး။”လို့ သူ့အဖေနဲ့ဓာတ်ပုံမှာ စာရေးထားပါတယ်။
ဖခင်ဖြစ်သူဟာလည်း သူ့သားဆရာဝန်အတွက်အရမ်းကို ဂုဏ်ယူနေရသူပါ။
Sader ဟာအခုတော့ သွားဆရာဝန်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါဟာ Syria ရဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့ဝင်ငွေအများဆုံးရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။Jad ကတော့ အပျော်ရွှင်ရဆုံးသူတစ်ဦးဖြစ်နေပြီး “ငါ့သားက ဆရာဝန်တစ်ယောက်လေ။” လို့ပြောတိုင်း Jad ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာ အပျော်နဲ့အရောင်တောက်လာစမြဲပါပဲ။
ဒီမိသားစုကတော့ ထင်မြင်ချက်အမှားတွေကို အခုလိုသက်သေနဲ့အတူ အမှန်ပြင်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ သာဓကတစ်ခုပါပဲ။
မိသားစုဆက်ဆံရေးအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ Sader ပြောပြတာကတော့ သူတို့မိဘနှစ်ဦးရဲ့ ချစ်ခြင်းက ဆယ်စုနှစ်တွေအကြာမှာတောင် မနေ့ကမှလက်ထပ်ထားသလို တည်မြဲနေသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူတို့က တစ်ယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုတစ်ယောက် ကောင်းကောင်းနားလည်ကြတယ်။ လမ်းအတူလျှောက်ရတာမျိုးလည်းသူတို့သဘောကျပြီး တစ်ခါတစ်လေဆို နာရီနဲ့ချီကြာအောင် စကားထိုင်ပြောနေတတ်ကြတယ်လို့ သူကပြောပါသေးတယ်။
Sader က သူ့အောင်မြင်မှုတွေကို သူ့အဖေကြောင့်ပါပဲလို့ ပြောကြားခဲ့ပြီး သူ့အဖေက သူ့အပေါ်ဂုဏ်ယူသလောက်သူကလည်းသူ့အဖေအပေါ် အရမ်းဂုဏ်ယူရတယ်လို့ ဆိုပါသေးတယ်။သူတို့သားအဖဟာဆိုရင် အားလပ်တဲ့အချိန်တွေမှာ ဇာတ်ကားတွေလည်း အတူကြည့်တတ်ကြပါတယ်။
ဒီလိုကြည်နူးစရာ ဇာတ်လမ်းလေးကို ဖတ်ချင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ သူတွေကို comment မှာ mention လုပ်ပြီး ကြည်နူးစရာလေးတွေ မျှဝေပေးကြပါဦး။
December 9, 2021 by Shwengwe Games
မကွာသေးမီက လူ့လောကထဲသို့ရောကျရှိလာတဲ့ မှေးကငျးစ အမွှာယောကျြားလေးနှဈဦးဟာ မိခငျရဲ့သားအိမျထဲမှာနခေဲ့ရသလို အခငျြးခငျြးပှဖေ့ကျခွငျးကိုရပျတနျ့ဖို့ ငွငျးဆိုခဲ့ကွပါတယျ။
အဆိုပါ အသကျ နှဈလအောကျ အမွှာယောကျြားလေးနှဈဦးအား သားဖှားသူနာပွုမြားက ရခြေိုးပေးနစေဉျ တဈယောကျကို တဈယောကျ ဆုပျကိုငျထားခဲ့ကွပွီး
၎င်းငျးလကျနှဈဖကျနှငျ့ ခွထေောကျမြားဖွငျ့ တဈဦးနှငျ့တဈဦး ဖကျသှယျထားကွတာကို ဗီဒီယိုထဲမှာ တှမွေ့ငျနိုငျပါတယျ။ ဒီမယုံနိုငျလောကျတဲ့ဗီဒီယိုတဈခုမှာ မှေးကငျးစကတညျးကပငျ ထိုနှောငျကွိုးက မညျမြှနကျရှိုငျးတာကို ပွသနပေါတယျ။
ဒီဗီဒီယိုတဈခု ဟာ YouTube မှာ အကွိမျရေ သနျး 50 နီးပါး ကွညျ့ရှုခံခဲ့ရပါတယျ။ ပွငျသဈနိုငျငံ ပါရီမွို့မှ Sonia Rochel အမညျရှိ သားဖှားသူနာပွုတဈဦးက ထိုအမွှာယောကျြားလေးနှဈဦးကို မှေးဖှါးပေးခဲ့ပွီး
ထိုအမွှာလေးမြားကို အထူးရခြေိုးနညျးဖွငျ့ရခြေိုးပေးနခေဲ့တာဘဲဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါနညျးပညာက သားအိမျတှငျးရှိ ခံစားခကျြကိုထပျတူထပျမြှဖွဈစပွေီး အသကျနှဈလအောကျ ကလေးငယျမြားအတှကျ ဒီဇိုငျးထုတျထားတာဘဲဖွဈပါတယျ။
ဗီဒီယိုရှိ ထိုအမွှာယောကျြားလေးနှဈဦးဟာ ၎င်းငျးတို့ကို မမှေးဖှားမီကတညျးက အခငျြးခငျြး ရငျးနှီးခငျြကွကွောငျးကို သကျသပွေနပေါတယျ။
မကြာသေးမီက လူ့လောကထဲသို့ရောက်ရှိလာတဲ့ မွေးကင်းစ အမြွှာယောက်ျားလေးနှစ်ဦးဟာ မိခင်ရဲ့သားအိမ်ထဲမှာနေခဲ့ရသလို အချင်းချင်းပွေ့ဖက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
အဆိုပါ အသက် နှစ်လအောက် အမြွှာယောက်ျားလေးနှစ်ဦးအား သားဖွားသူနာပြုများက ရေချိုးပေးနေစဉ် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဆုပ်ကိုင်ထားခဲ့ကြပြီး
၎င်းလက်နှစ်ဖက်နှင့် ခြေထောက်များဖြင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဖက်သွယ်ထားကြတာကို ဗီဒီယိုထဲမှာ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီမယုံနိုင်လောက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာ မွေးကင်းစကတည်းကပင် ထိုနှောင်ကြိုးက မည်မျှနက်ရှိုင်းတာကို ပြသနေပါတယ်။
ဒီဗီဒီယိုတစ်ခု ဟာ YouTube မှာ အကြိမ်ရေ သန်း 50 နီးပါး ကြည့်ရှုခံခဲ့ရပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရီမြို့မှ Sonia Rochel အမည်ရှိ သားဖွားသူနာပြုတစ်ဦးက ထိုအမြွှာယောက်ျားလေးနှစ်ဦးကို မွေးဖွါးပေးခဲ့ပြီး
ထိုအမြွှာလေးများကို အထူးရေချိုးနည်းဖြင့်ရေချိုးပေးနေခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနည်းပညာက သားအိမ်တွင်းရှိ ခံစားချက်ကိုထပ်တူထပ်မျှဖြစ်စေပြီး အသက်နှစ်လအောက် ကလေးငယ်များအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ဗီဒီယိုရှိ ထိုအမြွှာယောက်ျားလေးနှစ်ဦးဟာ ၎င်းတို့ကို မမွေးဖွားမီကတည်းက အချင်းချင်း ရင်းနှီးချင်ကြကြောင်းကို သက်သေပြနေပါတယ်။
November 4, 2021 by Shwengwe Games
အိန်ဒိယနိုငျငံမွောကျပိုငျး ဂင်ျဂါမွဈဘေးတှငျနထေိုငျတဲ့လူသသေားစားပီး လူသမြေားပျေါတှငျအိပျတဲ့ အာဂျေါရီလူသားစားသူမြားဟာ ဂင်ျဂါမွဈရကေို လူရဲ့ဦးခေါငျးခှံမြားဖွငျ့ သောကျသုံး‌လေ့ရှိပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ ခန်ဒာကိုယျပျေါတှငျလညျး အရိုးပွာမြားကို သုတျလိမျးထားကွပါတယျ။ သူတို့ဟာ လူသသေားမြားကိုသာ စားသုံးခွငျးဖွဈ‌ပမေယျ့ ဒသေခံမြားက သူတို့ကိုကွောကျရှံ့ကွပါတယျ။
အသကျ ၃၇ အရှယျ ဒါရာဂျြမာဆနျအမညျရှိအိုငျးရဈဓာတျပုံဆရာမှာ တပစရိယအကငျြ့ ကငျြ့ကွံနတေယျဆိုသော သူတို့နှငျ့ခဏတာ သှားရောကျနထေိုငျကာ သူတို့ရဲ့ အမူအကငျြ့မြားကို သှားရောကျလလေ့ာခဲ့ပါတယျ။ ဒရာဂျြက ” သူတို့တှကေ ဂင်ျဂါမွဈထဲက အလောငျးတှကေိုယူပီးစားသောကျကွတာကွောငျ့ နာမညျကွီးကွတာပါ ” ဟု ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ သူတို့ဟာ လူသမြေားအား မီးသင်ျဂွလျတဲ့ နရောမြားမှ အရိုးခေါငျးမြားနှငျ့ လူရိုးမြားကိုယူဆောငျကာ သူတို့ရဲ့ကငျြ့စဉျမြားအတှကျအသုံးပွုကွပွီး လူသမြေားဆီမှ စှမျးအားမြားရရှိနိုငျသညျလို့လညျး ယုံကွညျကွပါတယျ။
” တဈခါကြှနျတေျာ့ကိုအရိုးခေါငျးနှငျ့ဂင်ျဂါမွဈထဲက ရကေိုခပျတိုကျပါသေးတယျ၊ ဒါပမေယျ့သိပျမဝေးတဲ့မွဈရဲ့ အပျေါပိုငျးခွောကျပအေကှာလောကျမှာ လူသအေလောငျးတှကေို မီးရှို့ သင်ျဂွုလျနတောကွောငျ့ ကြှနျတျောမသောကျရဲပါဘူး၊ ရထေဲမှာရောဂါပိုးတှပေါလာနိုငျလို့ပါ ” ဆိုပွီး ဒရာဂျြက ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ လူသသေားစားသူမြားဟာ အဝတျအစားမြားကိုကောငျးမှနျစှာဝတျစားဆငျယငျခွငျးမရှိပဲ အမွဲတစေ ဆံပငျမြားရှုပျပှနကော ဘိုသီဖတျသီနတေတျ‌ပေမယျ့လညျး အလှူအတနျးမှာ အငျမတနျရကျရောသူမြားဖွဈသညျဟု သိရှိရပါတယျ။ သူတို့ဟာ အနာကွီးရောဂါသညျမြားအား ကုသပေးရေး ဖောငျဒရှေငျးတဈခု တညျထောငျထားကာ လူနာပေါငျး ၁၄၇၅၀၃ ဦးကို အခမဲ့ဆေးကုသပေးခဲ့ပွီဖွဈကွောငျးသိရပါတယျ။
အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ဂင်္ဂါမြစ်ဘေးတွင်နေထိုင်တဲ့လူသေသားစားပီး လူသေများပေါ်တွင်အိပ်တဲ့ အာဂေါ်ရီလူသားစားသူများဟာ ဂင်္ဂါမြစ်ရေကို လူရဲ့ဦးခေါင်းခွံများဖြင့် သောက်သုံး‌လေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ခန္ဒာကိုယ်ပေါ်တွင်လည်း အရိုးပြာများကို သုတ်လိမ်းထားကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ လူသေသားများကိုသာ စားသုံးခြင်းဖြစ်‌ပေမယ့် ဒေသခံများက သူတို့ကိုကြောက်ရွံ့ကြပါတယ်။
အသက် ၃၇ အရွယ် ဒါရာဂ်ျမာဆန်အမည်ရှိအိုင်းရစ်ဓာတ်ပုံဆရာမှာ တပစရိယအကျင့် ကျင့်ကြံနေတယ်ဆိုသော သူတို့နှင့်ခဏတာ သွားရောက်နေထိုင်ကာ သူတို့ရဲ့ အမူအကျင့်များကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဒရာဂ်ျက ” သူတို့တွေက ဂင်္ဂါမြစ်ထဲက အလောင်းတွေကိုယူပီးစားသောက်ကြတာကြောင့် နာမည်ကြီးကြတာပါ ” ဟု ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ လူသေများအား မီးသင်္ဂြလ်တဲ့ နေရာများမှ အရိုးခေါင်းများနှင့် လူရိုးများကိုယူဆောင်ကာ သူတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်များအတွက်အသုံးပြုကြပြီး လူသေများဆီမှ စွမ်းအားများရရှိနိုင်သည်လို့လည်း ယုံကြည်ကြပါတယ်။
” တစ်ခါကျွန်တော့်ကိုအရိုးခေါင်းနှင့်ဂင်္ဂါမြစ်ထဲက ရေကိုခပ်တိုက်ပါသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်သိပ်မဝေးတဲ့မြစ်ရဲ့ အပေါ်ပိုင်းခြောက်ပေအကွာလောက်မှာ လူသေအလောင်းတွေကို မီးရှို့ သင်္ဂြုလ်နေတာကြောင့် ကျွန်တော်မသောက်ရဲပါဘူး၊ ရေထဲမှာရောဂါပိုးတွေပါလာနိုင်လို့ပါ ” ဆိုပြီး ဒရာဂ်ျက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ လူသေသားစားသူများဟာ အဝတ်အစားများကိုကောင်းမွန်စွာဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းမရှိပဲ အမြဲတစေ ဆံပင်များရှုပ်ပွနေကာ ဘိုသီဖတ်သီနေတတ်‌ပေမယ့်လည်း အလှူအတန်းမှာ အင်မတန်ရက်ရောသူများဖြစ်သည်ဟု သိရှိရပါတယ်။ သူတို့ဟာ အနာကြီးရောဂါသည်များအား ကုသပေးရေး ဖောင်ဒေရှင်းတစ်ခု တည်ထောင်ထားကာ လူနာပေါင်း ၁၄၇၅၀၃ ဦးကို အခမဲ့ဆေးကုသပေးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
သတင်းအရင်းအမြစ်៖ Daily Mail
ကမ်ဘာကွီးရဲ့ တဈနရောက သံလိုကျအိမျမွှောငျ အလုပျမလုပျတဲ့ ထိတျလနျ့စရာ ရှာလေးတဈရှာ
သရဲကွီးမြားနလေ့ညျး တဖွညျးဖွညျး နီးလာနပွေီဆိုတော့ ထိတျလနျ့စရာကောငျးတဲ့ ရှာလေးတဈရှာအကွောငျးကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။ So Lo Pun ရှာဆိုတာက ဟောငျကောငျမွို့ ပွငျ တဈနရောကရှေးခတျေ ရှာငယျလေးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ရှာထဲရောကျတာနဲ့ သံလိုကျအိမျ‌မွှောငျတှဟော ထူးဆနျးစှာနဲ့ပဲ အလုပျမလုပျတော့ပါဘူး။ ရှာလေးကို AD 872 က တညျဆောကျထား ခဲ့ပွီး 1980 ခုနှဈမှာ လူတှေ စှနျ့ခှာခဲ့ကွပါတယျ။
အကွောငျးကတော့ နယျခံတှေ ပွောပွတာက So Lo Pan ရှာသားတှကေ တဈခွားရှာရဲ့ မင်ျဂလာဆောငျတဈခုမှာ ဝိုငျးကူလုပျပေးဖို့ လှေ ဖွငျ့ အသှား လမျးခုလတျမှာ လှနေဈမွုပျခဲ့ပွီး အကုနျသကေုနျခဲ့ကွပါတယျ။ ရှာထဲက အိမျ တိုငျး ရှာသားတဈယောကျစီ သဆေုံးခဲ့ကွပွီး ရှာလုံးကြှတျအသုဘ လုပျခဲ့ကွရဖူးပါတယျ။ 1980 မှာတော့ ရှာလေးမှာ လူမနကွေတော့ဘဲ ရှာလေးက တိတျဆိတျပွီး ညဆို တျောတျောလေးကွောကျဖို့ ကောငျးပါတယျ။
ရှာကို လာရောကျလညျပတျကွတဲ့ ခရီးသှားတဈယောကျဟာ ရနေဈသဆေုံးထားတဲ့ လူသေ ဝိညာဉျနှငျ့ ရငျဆိုငျကွုံတှေ့ ခဲ့ရပွီး နှလုံးသှေး ရပျတနျ့ သဆေုံးခဲ့ဖူးပမေဲ့ ခွောကျခွားမှု အရသာ ခံစားလိုတဲ့ ခရီးသှားတှကေတော့ အန်တရာယျမြားတဲ့ရှာလေးကို သှားရောကျ လညျပတျလကျြ ရှိနဆေဲပဲ ဖွဈပါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့လညျး သရဲအကွောငျးတှေ လလေ့ာစှနျ့စားရတာကွိုကျရငျတော့ တဈနကြေ့ သှားရောကျလညျပတျကွညျ့ပါအုနျး။
သရဲကြီးများနေ့လည်း တဖြည်းဖြည်း နီးလာနေပြီဆိုတော့ ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာအကြောင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ So Lo Pun ရွာဆိုတာက ဟောင်ကောင်မြို့ ပြင် တစ်နေရာကရှေးခေတ် ရွာငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရွာထဲရောက်တာနဲ့ သံလိုက်အိမ်‌မြှောင်တွေဟာ ထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲ အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး။ ရွာလေးကို AD 872 က တည်ဆောက်ထား ခဲ့ပြီး 1980 ခုနှစ်မှာ လူတွေ စွန့်ခွာခဲ့ကြပါတယ်
အကြောင်းကတော့ နယ်ခံတွေ ပြောပြတာက So Lo Pan ရွာသားတွေက တစ်ခြားရွာရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုမှာ ဝိုင်းကူလုပ်ပေးဖို့ လှေ ဖြင့် အသွား လမ်းခုလတ်မှာ လှေနစ်မြုပ်ခဲ့ပြီး အကုန်သေကုန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရွာထဲက အိမ် တိုင်း ရွာသားတစ်ယောက်စီ သေဆုံးခဲ့ကြပြီး ရွာလုံးကျွတ်အသုဘ လုပ်ခဲ့ကြရဖူးပါတယ်။ 1980 မှာတော့ ရွာလေးမှာ လူမနေကြတော့ဘဲ ရွာလေးက တိတ်ဆိတ်ပြီး ညဆို တော်တော်လေးကြောက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ရွာကို လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ ခရီးသွားတစ်ယောက်ဟာ ရေနစ်သေဆုံးထားတဲ့ လူသေ ဝိညာဉ်နှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ ခဲ့ရပြီး နှလုံးသွေး ရပ်တန့် သေဆုံးခဲ့ဖူးပေမဲ့ ခြောက်ခြားမှု အရသာ ခံစားလိုတဲ့ ခရီးသွားတွေကတော့ အန္တရာယ်များတဲ့ရွာလေးကို သွားရောက် လည်ပတ်လျက် ရှိနေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့လည်း သရဲအကြောင်းတွေ လေ့လာစွန့်စားရတာကြိုက်ရင်တော့ တစ်နေ့ကျ သွားရောက်လည်ပတ်ကြည့်ပါအုန်း။
ယောကျြားလေး (၃) ယောကျ လကျထပျခဲ့ကွတဲ့ ထိုငျးနိုငျငံက ထူးထူးဆနျးဆနျး မင်ျဂလာပှဲ
October 8, 2021 by Shwengwe Games
တိုးတကျပွောငျးလဲနတေဲ့ ဒီနခေ့တျေကွီးမှာ ယောကျြားလေး အခငျြးခငျြး ပွနျယူကွတယျဆိုတာတော့ အဆနျးမဟုတျပါဘူး။ ဒီနခေ့တျေမှာ လိငျတူခဈြသူတှကေိုလညျး ပတျဝနျးကငျြ အသိုငျးအဝိုငျးက အရငျခတျေတှကေလိုမြိုး ခှဲခွားဆကျဆံတာမြိုးတှေ မရှိတော့တာကွောငျ့ တျောတျောလေးကို ပှငျ့လငျးနကွေပွီ ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ လိငျတူခဈြသူတှရေဲ့ လကျထပျမင်ျဂလာပှဲတှကေိုလညျး နိုငျငံတျောတျောမြားမြားမှာ ကငျြးပခှငျ့ပေးနကွေပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ အခုပွောပွခငျြတဲ့ လိငျတူခဈြသူ မင်ျဂလာပှဲလေးကတော့ တျောတျောလေးကို ထူးဆနျးပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လို့လဲဆိုတာ့ အမြိုးသား ၃ ယောကျရဲ့လကျထပျမင်ျဂလာပှဲဖွဈနတောကွောငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
အဆိုပါ မင်ျဂလာပှဲကတော့ ထိုငျးနိုငျငံ၊ Chanthaburi စီရငျစုမှာ ကငျြးပခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အသကျ ၃၀ အရှယျ အမြိုးသား James Chandmthong, အသကျ ၂၂ နှဈအရှယျ အမြိုးသား Noah Amsapchan နဲ့ အသကျ ၂၄ နှဈအရှယျ အမြိုးသား Nong Toei Buutawat တို့ရဲ့ မင်ျဂလာပှဲပဲ ဖွဈပါတယျ။
သူတို့ ၃ ဦးဟာ အဆိုပါ မင်ျဂလာပှဲကို မိဘဆှမြေိုးအသိုငျးအဝိုငျး စုံညီစှာနဲ့ ဗုဒ်ဓဘာသာ ထုံးတမျးအစဉျအလာအတိုငျး လကျထပျခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။ James နဲ့ Noah တို့ကတော့ တှဲလာတာ ၇ နှဈရှိပါပွီ။ ဒီလိုနဲ့ ကလပျတဈခုမှာ Nong ကို တှမွေ့ငျခဲ့ပွီး နှဈယောကျစလုံး သဘောကခြဲ့သလို Nong ကလညျး James ကော၊ Noah ကိုပါ နှဈသကျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီနောကျမှာတော့ ၃ ယောကျစလုံးဟာ အိမျတဈအိမျထဲမှာ အတူတူ နခေဲ့ကွတာဖွဈပွီး နောကျဆုံးမှာတော့ မိဘတှကေို ဖှငျ့ပွောကာ ၃ ယောကျသား လကျထပျခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။ Nong ရဲ့ မိခငျဖွဈသူကလညျး သူ့ရဲ့ သားတဈယောကျ အခုလို ခငျပှနျး ၂ ယောကျစလုံးကို
တဈပွိုငျနကျ ရရှိသှားတာကွောငျ့ တျောတျောလေးကို ပြျောနကွေောငျး သိရပါတယျ။ အခုဆိုရငျတော့ သူတို့ ၃ ယောကျစလုံးဟာ အတူတကှ နထေိုငျနကွေပွီး ပြျောရှငျတဲ့ ဘဝလေးကို ၃ ယောကျသားအတူတူ ဖနျတီးနကွေကွောငျး သိရပါတယျ။
တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာ ယောက်ျားလေး အချင်းချင်း ပြန်ယူကြတယ်ဆိုတာတော့ အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လိင်တူချစ်သူတွေကိုလည်း ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းက အရင်ခေတ်တွေကလိုမျိုး ခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးတွေ မရှိတော့တာကြောင့် တော်တော်လေးကို ပွင့်လင်းနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲတွေကိုလည်း နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ကျင်းပခွင့်ပေးနေကြပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုပြောပြချင်တဲ့ လိင်တူချစ်သူ မင်္ဂလာပွဲလေးကတော့ တော်တော်လေးကို ထူးဆန်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်လို့လဲဆိုတာ့ အမျိုးသား ၃ ယောက်ရဲ့လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲဖြစ်နေတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ မင်္ဂလာပွဲကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ Chanthaburi စီရင်စုမှာ ကျင်းပခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၃၀ အရွယ် အမျိုးသား James Chandmthong, အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် အမျိုးသား Noah Amsapchan နဲ့ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် အမျိုးသား Nong Toei Buutawat တို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ ၃ ဦးဟာ အဆိုပါ မင်္ဂလာပွဲကို မိဘဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်း စုံညီစွာနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအတိုင်း လက်ထပ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ James နဲ့ Noah တို့ကတော့ တွဲလာတာ ၇ နှစ်ရှိပါပြီ။ ဒီလိုနဲ့ ကလပ်တစ်ခုမှာ Nong ကို တွေ့မြင်ခဲ့ပြီး နှစ်ယောက်စလုံး သဘောကျခဲ့သလို Nong ကလည်း James ကော၊ Noah ကိုပါ နှစ်သက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ ၃ ယောက်စလုံးဟာ အိမ်တစ်အိမ်ထဲမှာ အတူတူ နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ မိဘတွေကို ဖွင့်ပြောကာ ၃ ယောက်သား လက်ထပ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Nong ရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကလည်း သူ့ရဲ့ သားတစ်ယောက် အခုလို ခင်ပွန်း ၂ ယောက်စလုံးကို
တစ်ပြိုင်နက် ရရှိသွားတာကြောင့် တော်တော်လေးကို ပျော်နေကြောင်း သိရပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ သူတို့ ၃ ယောက်စလုံးဟာ အတူတကွ နေထိုင်နေကြပြီး ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝလေးကို ၃ ယောက်သားအတူတူ ဖန်တီးနေကြကြောင်း သိရပါတယ်။
ကမ်ဘာ့နိုငျငံအားလုံးကို လညျပတျဖူးတဲ့ ပထမဆုံးမိနျးကလေး
October 1, 2021 by Shwengwe Games
လူတဈယောကျက နိုငျငံ (၅၀) လောကျကို ရောကျဖူးတယျလို့ပွောလာခဲ့ရငျ ကြှနျတျောတို့ သူ့ကို အထငျကွီးမိမှာပါ။ နိုငျငံ (၁၀၀)လောကျကို သှားရောကျလညျပတျဖူးတယျလို့ပွောလာရငျတော့ ပိုပွီးအားကမြိပွီပေါ့။ တဈကမ်ဘာလုံးမှ နိုငျငံက (၁၉၆) နိုငျငံပဲရှိတာကိုး။
အဲ…အဲ့ဒီ (၁၉၆) နိုငျငံစလုံးကို ရောကျဖူးတယျလို့ပွောလာရငျရော.?၂၀၁၆ မှာ Cassandra De Pecol ဆိုတဲ့ အသကျ (၂၇)နှဈအရှယျ အမရေိကနျ မိနျးက လေး ဟာ နိုငျငံပေါငျး (၁၈၁) နိုငျငံကို သှားရောကျလညျပတျပွီးသှားပါပွီ။
“တဈကမ်ဘာလုံးက နိုငျငံအားလုံးကို အမွနျဆုံးသှားရောကျလညျပတျဖူးတဲ့ ပထမဦးဆုံး လူသား”အဖွဈ ဂငျးနဈမှတျတမျးဝငျဖို့ (၁၅)နိုငျငံသာလိုပါတော့တယျ။ သူမဟာ ဒီခရီးစဉျကို “Expedition196” လို့အမညျပေးထားပွီး ၂၀၁၅ ခုနှဈ ဇူလိုငျလက စတငျထှကျခှါခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒီခရီးစဉျကို IIPT (International Institute for Peace through Tourism) အဖှဲရဲ့ ကိုယျစားပွု သံတမနျအဖွဈ ထှကျခှါခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ ခရီးစဉျတဈခုလုံးအတှကျ ဒျေါလာ နှဈသိနျးခနျ့ ကုနျကစြရိတျရှိပမေဲ့ ခရီးစဉျတဈလြှောကျ မှတျတမျးတငျဓာတျပုံတှရေိုကျကူးပွီး Facebook, Instagram တို့မှာ ပွနျကွျောငွာပေးခွငျးဖွငျ့ ခရီးစရိတျ စပှနျဆာတှေ ပွနျလညျရရှိခဲ့ပါတယျ။
Credit : Allinone
လူတစ်ယောက်က နိုင်ငံ (၅၀) လောက်ကို ရောက်ဖူးတယ်လို့ပြောလာခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ သူ့ကို အထင်ကြီးမိမှာပါ။ နိုင်ငံ (၁၀၀)လောက်ကို သွားရောက်လည်ပတ်ဖူးတယ်လို့ပြောလာရင်တော့ ပိုပြီးအားကျမိပြီပေါ့။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ နိုင်ငံက (၁၉၆) နိုင်ငံပဲရှိတာကိုး။
အဲ…အဲ့ဒီ (၁၉၆) နိုင်ငံစလုံးကို ရောက်ဖူးတယ်လို့ပြောလာရင်ရော.?၂၀၁၆ မှာ Cassandra De Pecol ဆိုတဲ့ အသက် (၂၇)နှစ်အရွယ် အမေရိကန် မိန်းက လေး ဟာ နိုင်ငံပေါင်း (၁၈၁) နိုင်ငံကို သွားရောက်လည်ပတ်ပြီးသွားပါပြီ။
“တစ်ကမ္ဘာလုံးက နိုင်ငံအားလုံးကို အမြန်ဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်ဖူးတဲ့ ပထမဦးဆုံး လူသား”အဖြစ် ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင်ဖို့ (၁၅)နိုင်ငံသာလိုပါတော့တယ်။ သူမဟာ ဒီခရီးစဉ်ကို “Expedition196” လို့အမည်ပေးထားပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လက စတင်ထွက်ခွါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီခရီးစဉ်ကို IIPT (International Institute for Peace through Tourism) အဖွဲရဲ့ ကိုယ်စားပြု သံတမန်အဖြစ် ထွက်ခွါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးအတွက် ဒေါ်လာ နှစ်သိန်းခန့် ကုန်ကျစရိတ်ရှိပေမဲ့ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကူးပြီး Facebook, Instagram တို့မှာ ပြန်ကြော်ငြာပေးခြင်းဖြင့် ခရီးစရိတ် စပွန်ဆာတွေ ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
September 29, 2021 by Shwengwe Games
လူတိုငျးမှာ ကိုယျပိုငျရူးသှပျတဲ့ စုဆောငျးမှုလေးတှရှေိပါတယျ။ တခြို့ကတြော့လညျး မိမိတို့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို အလှနျတနျဖိုးထားကွပါတယျ။ အဲ့နှဈခုကို ပေါငျးစပျလိုကိတဲ့အခါမှာတော့ အံ့အားသငျ့စခေဲ့ရပါတယျ။ အဲ့လိုလူတှထေဲမှာ ဗွိတိနျက အမြိုးသမီးတဈယောကျလညျး ပါဝငျပါတယျ။ သူမကတော့ ကမ်ဘာပျေါမှာ ဘယျသူမှမလုပျသေးတဲ့ ထူးထူးဆနျးဆနျး အလှဆငျ ပစ်စညျးတဈခုကို ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။
သူမနာမညျကတော့ Tracy Kiss ပဲဖွဈကာ Model ဟောငျး တဈယောကျဆိုလညျး မမှားသလို ကလေးနှဈယောကျရှိတဲ့ Single Mom လညျးဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ယောနီဟာ တခွားသူမြားထကျ ထူထဲလှနျးနပွေီး နာကငျြနရေတာကွောငျ့ ပါးလှာသှားအောငျ ခှဲစိတျမှုတှပွေုလုပျခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဖွတျတောကျပွီးလို့ ရရှိလာတဲ့ အစိတျအပိုငျးနှဈခုကို လှပတဲ့လော့ကတျသီးလေး တဈခုအဖွဈပွောငျးလဲကာ အလှဆငျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီအစိတျအပိုငျးနှဈခုကိုတော့ ခရဈစတယျအဖွဈ ပုံစံသှငျးခဲ့ပါတယျ။ အဲ့နောကျ တောကျပပွီးလှပတဲ့ ခရဈစတယျအမှုနျကလေးမြားနဲ့ ထပျမံရောစပျကာ အလှဆငျခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒီလိုထူးထူးဆနျးဆနျးလုပျခဲ့တဲ့ သူမရဲ့အပွုအမှုအပျေါ သူမကတော့ “ ကြှနျမကိုယျတိုငျ မနှဈမွို့ခဲ့တဲ့ အစိတျအပိုငျးတှကေ အခုဆိုရငျတော့ တလတျလတျတောကျပကာ လှပလှနျးတဲ့ ရတနာလေးတဈခုအဖွဈ ပွောငျးလဲနိုငျခဲ့ပွီ ဒီအတှကျကွောငျ့ အရမျးကိုဂုဏျယူမိတယျလို့” ဆိုပါတယျ။
သတငျးအရငျးမွဈ: Mirror,Credit MMLOAD
ခွထေောကျနှဈဖကျမရှိပမေယျ့ လကျနှဈဖကျထဲနဲ့ ကမ်ဘာ့အပွေးအမွနျဆုံး စံခြိနျတငျခဲ့သူ
September 28, 2021 by Shwengwe Games
“ဘယျလိုနညျးမြိုးနဲ့ မသနျစှမျးတဲ့သူပဲဖွဈဖွဈ ကြှနျတျောပွောခငျြတာက ဘဝက ခကျလိမျ့မယျ၊ ဒါပမေယျ့ ဆုံးဖွတျခကျြခိုငျမာပွီး ကွိုးစားမှုရှိမယျဆိုရငျ ဘာမဆိုဖွဈနိုငျပါတယျ။ မသနျစှမျးသူဖွဈဖွဈ၊ ပုံမှနျလူဖွဈဖွဈ အတူတူပါပဲ” Zion Clark
မှေးကတညျးက လကျနှဈဖကျနဲ့ ခန်ဓာကိုယျ အပျေါပိုငျးတဈဝကျပဲ ပါလာခဲ့တဲ့ မသနျစှမျးတဈဦးဖွဈတဲ့ Zion Clark ဟာ သူ့လကျတှကေိုပဲ အသုံးပွုပွီး လမျးလြှောကျရပါတယျ။ အံ့သွစရာကောငျးတာက ခွထေောကျတှပေါမလာတဲ့ Zion က ခွထေောကျနှဈခြောငျးနဲ့အပွေးခနျြပီယံတှထေကျ ပိုပွီးမွနျမွနျပွေးနိုငျနတောပါပဲ။
Zion က လကျရှိမှာ အသကျ (၂၃) နှဈရှိပွီဖွဈပွီး Motivational Speaker တဈဦးအဖွဈအသကျမှေးသလို သရုပျဆောငျလညျး အခါအားလြျောစှာလုပျပါတယျ။ Zion ရဲ့ အိပျမကျက အိုလံပဈပှဲတျောမှာဝငျပွိုငျပွီး ဆုတှအေမြားကွီးရအောငျယူဖို့ပါတဲ့။ ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျအနညျးငယျကပဲ Zion က မီတာ (၂၀) အကှာအဝေးကို (၄.၇၈) စက်ကနျ့နဲ့ရောကျအောငျပွေးပွီး ကမ်ဘာ့အပွေးအမွနျဆုံး လူသားအဖွဈ Guinness စံခြိနျတငျသှားခဲ့ပါပွီ။
လကျနှဈဖကျထဲနဲ့ ပွေးပွီး Guinness စံခြိနျတငျလိုကျတဲ့ Zion က မသနျစှမျးသူတှကေို “ဘယျလိုနညျးမြိုးနဲ့ မသနျစှမျးတဲ့သူပဲဖွဈဖွဈ ကြှနျတျောပွောခငျြတာက ဘဝက ခကျလိမျ့မယျ၊ ဒါပမေယျ့ ဆုံးဖွတျခကျြခိုငျမာပွီး ကွိုးစားမှုရှိမယျဆိုရငျ ဘာမဆိုဖွဈနိုငျပါတယျ။ မသနျစှမျးသူဖွဈဖွဈ၊ ပုံမှနျလူဖွဈဖွဈ အတူတူပါပဲ” လို့ အားပေးစကားပွောထားခဲ့ပါတယျ။
Zion ရဲ့နောကျထပျပနျးတိုငျကတော့ လာမယျ့ (၂၀၂၄) အိုလံပဈပှဲတျောမှာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျဖို့လို့ ဆိုပါတယျ။ Guinness စံခြိနျတငျသှားတဲ့ Zion ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို အားကစားပရိသတျကွီးအတှကျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ Video ကိုကွညျ့ရနျ
“ဘယ်လိုနည်းမျိုးနဲ့ မသန်စွမ်းတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဘဝက ခက်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာပြီး ကြိုးစားမှုရှိမယ်ဆိုရင် ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မသန်စွမ်းသူဖြစ်ဖြစ်၊ ပုံမှန်လူဖြစ်ဖြစ် အတူတူပါပဲ” Zion Clark
မွေးကတည်းက လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အပေါ်ပိုင်းတစ်ဝက်ပဲ ပါလာခဲ့တဲ့ မသန်စွမ်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Zion Clark ဟာ သူ့လက်တွေကိုပဲ အသုံးပြုပြီး လမ်းလျှောက်ရပါတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းတာက ခြေထောက်တွေပါမလာတဲ့ Zion က ခြေထောက်နှစ်ချောင်းနဲ့အပြေးချန်ပီယံတွေထက် ပိုပြီးမြန်မြန်ပြေးနိုင်နေတာပါပဲ။
Zion က လက်ရှိမှာ အသက် (၂၃) နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး Motivational Speaker တစ်ဦးအဖြစ်အသက်မွေးသလို သရုပ်ဆောင်လည်း အခါအားလျော်စွာလုပ်ပါတယ်။ Zion ရဲ့ အိပ်မက်က အိုလံပစ်ပွဲတော်မှာဝင်ပြိုင်ပြီး ဆုတွေအများကြီးရအောင်ယူဖို့ပါတဲ့။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်ကပဲ Zion က မီတာ (၂၀) အကွာအဝေးကို (၄.၇၈) စက္ကန့်နဲ့ရောက်အောင်ပြေးပြီး ကမ္ဘာ့အပြေးအမြန်ဆုံး လူသားအဖြစ် Guinness စံချိန်တင်သွားခဲ့ပါပြီ။
လက်နှစ်ဖက်ထဲနဲ့ ပြေးပြီး Guinness စံချိန်တင်လိုက်တဲ့ Zion က မသန်စွမ်းသူတွေကို “ဘယ်လိုနည်းမျိုးနဲ့ မသန်စွမ်းတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဘဝက ခက်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာပြီး ကြိုးစားမှုရှိမယ်ဆိုရင် ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မသန်စွမ်းသူဖြစ်ဖြစ်၊ ပုံမှန်လူဖြစ်ဖြစ် အတူတူပါပဲ” လို့ အားပေးစကားပြောထားခဲ့ပါတယ်။
Zion ရဲ့နောက်ထပ်ပန်းတိုင်ကတော့ လာမယ့် (၂၀၂၄) အိုလံပစ်ပွဲတော်မှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့လို့ ဆိုပါတယ်။ Guinness စံချိန်တင်သွားတဲ့ Zion ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို အားကစားပရိသတ်ကြီးအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Video ကိုကြည့်ရန်